Wasiir Xaange “Qorshayntu waa in ay noqoto mid ay hoggaamiso xog sax ah” – Kalfadhi
Wasiir Xaange “Qorshayntu waa in ay noqoto mid ay hoggaamiso xog sax ah”
Wasiirka cusub ee wasaaradda qorshaynta iyo Iskaashiga ee Puntland Cabdiqafar Cilmi Xaange, ku xigeenkiisa iyo wasiir dowlaha wasaaradaas ayaa maanta xilka kala wareegay madaxdii hore ee wasaaradda.
Munaasabad dhacday galabta ayaa wasiirku si gaar ah ugu faahfaahiyay qorshihiisa ku aadan horumarinta waaxda tirakoobyada ee wasaaradda, si loo helo buu yiri xog sax ah oo bulshada wax loogu qaban karo iyo si run ah loo ogaado tirada dadka.
“Qorshayntu waa in ay noqoto mid ay hoggaamiso xog sax ah” ayuu yiri wasiirka qorshaynta Cabdiqafar Xaange oo intaas ku daray in aan lagu sii shaqayn karin xogo malo-awaal ah oo aan la hubin.
Waaxda tirakoobyada ee wasaaradda ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay horumarin lagu sameeyay iyadoo kor loo qaaday aqoonta iyo tayada shaqaalaha, sida uu xil-wareejinta ka sheegay wasiirkii hore ee qorshaynta Shire Xaaji Faarax.
Mudane Xaange ayaa doonaya in uu kordhiyo dadka xirfada iyo farsamada leh ee ka shaqaynaya waaxdaas, sida uu ka sheegay munaasabadda uu xilka kula wareegayay.
Dowlada Puntland ee Soomaaliya ayaa jirta ku dhowaad 21 sano wayna adag tahay in xog dhab iyo daraasad tiro leh laga helo inta badan dhibaatooyinka bulsho ee deegaanka ka jira.
Xisbi uu hogaamiyo Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Hirshabeelle oo ka hadlay Khilaafka Soomaaliya iyo Kenya
Reysal Wasaare Kheyrre oo soo saaray Xeer Wasiirada ka mamnuucaya heshiis Caalami ah